ကောင်းစွာ, သူအရူးဟောင်းမအောက်မေ့ပါဘူး Thundercats 80 ရဲ့ကနေကာတွန်း? မုချ, ထိုသို့အချိန်လေးတွေအဘို့ဘဏ္ဍာကိုကြီးနှင့်အဆောက်အအုံပုံစံရေးဆွဲခြင်းဂိမ်းသိတယ်. သူတို့ကသငျသညျအသစ်ယူဆောင်လာ slot နှစ်ခုအခမဲ့ဆုကြေးငွေ တူညီသော theme.This slot ကပေါ်အခြေခံပြီးတချို့အကြီးအကာတွန်း Animation နဲ့ဂရပ်ဖစ်ကမ်းလှမ်း. အဆိုပါ Superheros တွေကသင်ပိုက်ဆံ boatloads ဆောင်ကြဉ်းနှင့်သင့်တစ်နေ့တာလုပ်ဒီမှာပါ. So spin the reels and get rollin’!
အဆိုပါသူရဲကောင်းများနှင့်အတူအံ့သြဖွယ် slot နှစ်ခုအခမဲ့ဆုကြေးငွေရယူနိုင်သော
ဒါဟာငါး reel slot ကရာယဇ်ဖြစ်သတည်း 30 အပေါ် paylines4အတန်း. ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာအညီအမျှပျော်စရာနှင့်အကြိုးအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေး slot ကဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်. ဒီ slot ကအများဆုံးအနိုင်ရရှိသည့်အလားအလာတစ်ခုဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါဖြစ်ပါသည် 250000. ထားဘေး, အထိုင်ရဲ့လိုဂို, နောက်ကျော scratchers, မော်တော်ယာဉ်နှင့် high-တန်ဖိုးကိုသင်္ကေတ၏ surfboard comprise. အဆိုပါအနိမ့်တန်ဖိုးကိုသင်္ကေတ J ကိုတူစံကစားကတ်များများမှာ, မေး, K နှင့် Ace ကို. အာကာသအများစုဟာအလှဆင်ဘို့ရုံမျှမရှိရာထိပ်ပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ဇာတ်ကောင်ကသိမ်းပိုက်ခြင်းဖြစ်သည်. အဆိုပါရိုင်းသင်္ကေတအနိုင်ရ combo ဖွဲ့စည်းရန်ရှိသမျှသည်အခြားသောသင်္ကေတများနေရာတွင်အစားထိုးနိုင်သည့် Tygra ဖြစ်ပါသည်.
Thundercats ထံမှ Thunder ဆုကြေးငွေ
အဆိုပါ Thundercats တစ်ခုချင်းစီ, ခြင်္သေ့သည်အို, Cheetara, Panthro, ရိုင်းကြောင်နှင့် Tygra သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သီးခြားအပိုဆုကြေးငွေနှင့်အတူ slot ကမိတ်ဆွေတို့ကိုဆုချ. အဆိုပါခြင်္သေ့အိုကျပန်းလွင်ပြင်ဖြည့်စွက်, Tygra အဆိုပါတိုးချဲ့လွင်ပြင်အင်္ဂါရပ်ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း. Cheetara ပထမဦးဆုံး reel အပေါ်မြေများအပိုလွင်ပြင် add သည့်အခါ. Panthro ထပ်သင်္ကေတကထပ်ပြောသည်နှင့်တောရိုင်းကြောင်တစ် 2x မြှောက်ကိန်းတစ်လျှောက်တွင်နှစ်ဦးကို stacked လွင်ပြင်ကမ်းလှမ်း.
ဤ slot နှစ်ခုအခမဲ့ဆုကြေးငွေ ထို့အပြင် slot ကမှဆုကြေးငွေများ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် set ကိုဖြည့်စွက်သောမိုဃ်းချုန်းဘီးဆုကြေးငွေ feature ကိုကမ်းလှမ်း.
အဆုံးစွန်မိုးကြိုးလှည့်ဖျား: အပေါ် stacked လွင်ပြင်3အတူရက်ကြောင့်မှားယွင်း5အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
Mumm-Ra အခမဲ့ဗိုင်းငင်: အတူ Expanded လွင်ပြင် 10 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
Slithe အခမဲ့ဗိုင်းငင်: နှင့်အတူစေးကပ်လွင်ပြင် 10 အခမဲ့ဗိုင်းငင်ပြီး5ပိုပြီးဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်.
Monkian အခမဲ့ဗိုင်းငင်: 10 တောရိုင်းပူဇုန်နှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
Jackalman အခမဲ့ဗိုင်းငင်: နှင့်အတူ 10x တစ်ခုတိုးပွားလာမြှောက်ကိန်း 10 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
ထို့အပြင်, Snarf အချိန်မရွေးပေါ်လာနှင့်ဤအံ့သြဖွယ်အတွက်အနိုင်ရရှိမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ် slot နှစ်ခုအခမဲ့ဆုကြေးငွေ. အဆိုပါမိုဃ်းချုန်းဆုကြေးငွေအင်္ဂါရပ်ဖို့ slot က၏အရွယ်အစားကိုတိုးပွားစေ reels 8 အတန်း. ထို့ကြောင့်ပိုပြီးတန်း, ပိုပြီးအနိုင်ပေး.
ဤသည်ဆုကြေးငွေ features တွေအများကြီးနဲ့ကိုအလွန်အကြိုး slot ကဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါဆုကြေးငွေ features တွေဤအရပ်မှဒီ slot ကအရင်ကဆိုရင်ဘို့ရှုပ်ထွေးအကြံပြုသည်မဟုတ်ကြသည်. ဤသည်အလွန်ပျော်စရာဖြစ်ပါတယ် slot နှစ်ခုအခမဲ့ဆုကြေးငွေ အရာအလတ်စားကှဲလှဲနေတဲ့အနိမ့်ကမ်းလှမ်း. ဒါဟာတစ်လျောက်ပတ်သော RTP ကမ်းလှမ်း 95.5%. ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်, မိုးကြိုး-ကြောင်နှင့်အတူကြီးမားတဲ့ payday အဘို့အဆင်သင့်မရ!
နယူးကာစီနိုဂိမ်း 2016 | get အခမဲ့£5| Coinfalls ကာစီနို